‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का नाममा याैन हिंसामा परेकी युवतीको पीडाः बेहोस बनाएर बलात्कार – kalikadainik.com
बिहिबार, जेठ ०५, २०७९ | १६:०२:२७ |
काठमाडौँ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ ।
एब्युजरले उनलाई गाली गर्‍यो । तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ? भनेर गाली गरे । ‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ भने । त्यसपछि उनी रूममा गएर रेष्ट गर्न गइन् ।
घटना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ । मिस नेपाल २०१८ श्रृखंला खतिवडा, नायिका पूजा शर्मा लगायतका सेलिब्रेटीहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न समेत माग गरिरहेका छन् । कृष्णसिंह धामी